ငှကျပြောသီး အစဈ ပို့ပွနျတဲ့ မိနျးခလေးကို ငှကျပြောသီး အတု ချေါကြှေးမိတဲ့ မောငျကှဲ အဖမျးခံရ - MM Live News
ငှက်ပျောသီးအစစ်ပို့ပြန်သူမိန်းခလေးကို ငှက်ပျောသီး အတုကျွေးမိတဲ့ မောင်ကွဲ အဖမ်းခံရပြီ
အမှုဖြစ်စဉ်မှာ၁၂.၁၁.၂၀၁၉ရက် ည၁၀နာရီ ၁၅မိနစ် အချိန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်ခရိုင်၊ ပန်တောင်းမြို့နယ်၊ ထုံးဘိုနယ်မြေရဲစခန်းတွင် ရဲအုပ်ကျော်ဇောလင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်မောင်ဖိုးဖြူ(၃၂)နှစ်၊ကျဘမ်း၊…….ရွာ၊……. ..အုပ်စု၊ ပန်တောင်းမြို့နယ်နေသူက ၄သည် ၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ရက်နံနက် ၁၀နာရီ အချိန်က……. ရွာရှိနေအိမ်မှ သပြေလှကျေးရွာရှိ ဖခင်ဖြစ်သူနှင့် အတူနေထိုင်သော ညီမဖြစ်သူမ………….ကို သွားရောက်ခေါ်ဆောင်စဉ် သပြေလှရွာရာအိမ်မှုး ဦးသန်းစိုး၏နေအိမ်တွင် ညီမဖြစ်သူမ…….၊ ဦးလေးဖြစ်သူဦးပြား၊
အဒေါ်ဝမ်းကွဲဖြစ်သူ မသန်းအေး၊တို့နှင့်အတူ ဦးသန်းစိုးအနီးတွင် ဂုံညှင်းတန်းကျေးရွာ၊ ကွင်းလှကျေးရွာ အုပ်စုနေထိုင်သူ ၀င်းနိုင်ထွန်း(ခ)မောင်ကွဲ (၄၄)နှစ်ကိုပါတွေ့ရှိရသောကြောင့်အကျိုးအကြောင်းမေးမြန်းကြည့်ရာ ညီမဖြစ်သူ မ…….က ၁၂.၁၁.၂၀၁၉နံနက် ၁၀နာရီ ၃၀ အချိန်နေအိမ်မှေ တာင်နီစုကျေးရွာထိပ်ရှိအကြော်ဆိုင်သို့ ငှက်ပျောသီးပို့ပြီး အပြန်တွင် ကွင်းလှအုပ်စု၊ ဂုံညှင်းတန်းရွာနေ ၀င်းနိုင်ထွန်းက ခင်မင်ရင်းနှီးသူဖြစ်သဖြင့် ၄င်းကို အိမ်သို့ လိုက်ပို့ပေးမည်ဟုပြောကာ ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ဆောင်ကာ သပြေလှကျေးရွာအနီး လူသူမရှိသော ငါးဖမ်းတဲအတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်ကာ ….
အလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ်(၁)ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊လူကြီးများတိုင်ပြောပါက သတ်ပြစ်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်ကာ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးပြားကလည်း ၄၏ တူမဖြစ်သူမ……ကို အမည်မသိလူတစ်ဦး၏ ဆိုင်ကယ်ပေါ်ပါသွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ကြောင်း၊ လိုက်ကြည့်ရာ လူမနေသောငါးဖမ်းတဲအတွင်း ၀င်သွားကြောင်းတွေ့မြင်ရသဖြင့် ရာအိမ်မှုး ဦးသန်းစိုးနှင့် အဒေါ်မသန်းအေးတို့ကိုပြောပြခေါ်ဆောင်ခဲ့ရာ တဲအတွင်းမ……နှင့် ၀င်းနိုင်ထွန်းတို့ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် ညီမဖြစ်သူမ…….ကို အလိုမတူဘဲသားမယားပြုကျင့်ခဲ့သူ ၀င်းနိုင်ထွန်း(ခ)မောင်ကွဲကို အရေးယူပေးပါရန် တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းခဲ့ရာ ….
ထုံးဘိုနယ်မြေရဲစခန်း (ပ)၅၀/၂၀၁၉ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆ အရ အမှုရေးဖွင့်ကာ အမှုစစ်ရဲအုပ်ကျော်ဇောလင်းက အခင်းဖြစ် ငါးဖမ်းတဲစစ်ဆေးခြင်း ၊မြေပုံကြမ်းရေးဆွဲခြင်း ၊မှတ်တမ်းပုံရိုက်ကူးခြင်း၊ သက်သေခံအ၀တ်အစားအချို့သိမ်းဆည်းကာပြုကျင့်ခံရသူ မ…..ကို ရဲဆေးစာနှင့်ဆေးရုံပို့ဆောင်စစ်ဆေးကာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ၀င်းနိုင်ထွန်း(ခ)မောင်ကွဲကိုအမှုနှင့်ဖမ်းဆီးကာ အသေးစိပ်စစ်မေးနေကြောင်းသိရသည်။ထွန်းမြင့်(ဥရှစ်ပင်)S.Hသတင်းဌာန၊ ရှုထောင့်မှုခင်းနှင့်သတင်းဂျာနယ်၊ အမှန်တရားဂျာနယ်
ငှကျပြောသီးအစဈပို့ပွနျသူမိနျးခလေးကို ငှကျပြောသီး အတုကြှေးမိတဲ့ မောငျကှဲ အဖမျးခံရပွီ
အမှုဖွဈစဉျမှာ၁၂.၁၁.၂၀၁၉ရကျ ည၁၀နာရီ ၁၅မိနဈ အခြိနျ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ပွညျခရိုငျ၊ ပနျတောငျးမွို့နယျ၊ ထုံးဘိုနယျမွရေဲစခနျးတှငျ ရဲအုပျကြျောဇောလငျး တာဝနျထမျးဆောငျနစေဉျမောငျဖိုးဖွူ(၃၂)နှဈ၊ကဘြမျး၊…….ရှာ၊……. ..အုပျစု၊ ပနျတောငျးမွို့နယျနသေူက ၄သညျ ၁၂.၁၁.၂၀၁၉ ရကျနံနကျ ၁၀နာရီ အခြိနျက……. ရှာရှိနအေိမျမှ သပွလှေကြေးရှာရှိ ဖခငျဖွဈသူနှငျ့ အတူနထေိုငျသော ညီမဖွဈသူမ………….ကို သှားရောကျချေါဆောငျစဉျ သပွလှေရှာရာအိမျမှုး ဦးသနျးစိုး၏နအေိမျတှငျ ညီမဖွဈသူမ…….၊ ဦးလေးဖွဈသူဦးပွား၊
အဒျေါဝမျးကှဲဖွဈသူ မသနျးအေး၊တို့နှငျ့အတူ ဦးသနျးစိုးအနီးတှငျ ဂုံညှငျးတနျးကြေးရှာ၊ ကှငျးလှကြေးရှာ အုပျစုနထေိုငျသူ ဝငျးနိုငျထှနျး(ခ)မောငျကှဲ (၄၄)နှဈကိုပါတှရှေိ့ရသောကွောငျ့အကြိုးအကွောငျးမေးမွနျးကွညျ့ရာ ညီမဖွဈသူ မ…….က ၁၂.၁၁.၂၀၁၉နံနကျ ၁၀နာရီ ၃၀ အခြိနျနအေိမျမှေ တာငျနီစုကြေးရှာထိပျရှိအကွျောဆိုငျသို့ ငှကျပြောသီးပို့ပွီး အပွနျတှငျ ကှငျးလှအုပျစု၊ ဂုံညှငျးတနျးရှာနေ ဝငျးနိုငျထှနျးက ခငျမငျရငျးနှီးသူဖွဈသဖွငျ့ ၎င်းငျးကို အိမျသို့ လိုကျပို့ပေးမညျဟုပွောကာ ဆိုငျကယျပျေါတငျဆောငျကာ သပွလှေကြေးရှာအနီး လူသူမရှိသော ငါးဖမျးတဲအတှငျးသို့ချေါဆောငျကာ ….
အလိုမတူပဲ သားမယားအဖွဈ(၁)ကွိမျပွုကငျြ့ခဲ့ကွောငျး၊လူကွီးမြားတိုငျပွောပါက သတျပွဈမညျဟုခွိမျးခွောကျကာ ဦးလေးဖွဈသူ ဦးပွားကလညျး ၄၏ တူမဖွဈသူမ……ကို အမညျမသိလူတဈဦး၏ ဆိုငျကယျပျေါပါသှားသညျကိုတှမွေ့ငျလိုကျကွောငျး၊ လိုကျကွညျ့ရာ လူမနသေောငါးဖမျးတဲအတှငျး ဝငျသှားကွောငျးတှမွေ့ငျရသဖွငျ့ ရာအိမျမှုး ဦးသနျးစိုးနှငျ့ အဒျေါမသနျးအေးတို့ကိုပွောပွချေါဆောငျခဲ့ရာ တဲအတှငျးမ……နှငျ့ ဝငျးနိုငျထှနျးတို့ကိုတှရှေိ့ရသဖွငျ့ ညီမဖွဈသူမ…….ကို အလိုမတူဘဲသားမယားပွုကငျြ့ခဲ့သူ ဝငျးနိုငျထှနျး(ခ)မောငျကှဲကို အရေးယူပေးပါရနျ တရားလိုပွုလုပျတိုငျတနျးခဲ့ရာ ….
ထုံးဘိုနယျမွရေဲစခနျး (ပ)၅၀/၂၀၁၉ ရာဇသတျကွီးဥပဒပေုဒျမ ၃၇၆ အရ အမှုရေးဖှငျ့ကာ အမှုစဈရဲအုပျကြျောဇောလငျးက အခငျးဖွဈ ငါးဖမျးတဲစဈဆေးခွငျး ၊မွပေုံကွမျးရေးဆှဲခွငျး ၊မှတျတမျးပုံရိုကျကူးခွငျး၊ သကျသခေံအဝတျအစားအခြို့သိမျးဆညျးကာပွုကငျြ့ခံရသူ မ…..ကို ရဲဆေးစာနှငျ့ဆေးရုံပို့ဆောငျစဈဆေးကာပွဈမှုကြူးလှနျသူ ဝငျးနိုငျထှနျး(ခ)မောငျကှဲကိုအမှုနှငျ့ဖမျးဆီးကာ အသေးစိပျစဈမေးနကွေောငျးသိရသညျ။ထှနျးမွငျ့(ဥရှဈပငျ)S.Hသတငျးဌာန၊ ရှုထောငျ့မှုခငျးနှငျ့သတငျးဂြာနယျ၊ အမှနျတရားဂြာနယျ
တိုင်းပြည်အနာဂတ် ကလေးတွေအတွက် သူကိုယ်တိုင် အပြောနဲ့ညီအောင် အလုပ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်
January 21, 2019 MM Live News